Utyelelo kwizibhedlele zephondo ezikwimeko emaxongo - RHAP
Home / Canzibe / Utyelelo kwizibhedlele zephondo ezikwimeko emaxongo
UMphathiswa wesebe lezempilo eMpuma Koloni uGqirha Pumza Dyantyi uzakujikeleza izibhedlele ezithile kwiveki ezayo, esabela kuthotho lwezikhalazo eziphakanyiswa luluntu mihla le malunga nemigangatho yezi zibhedlele.
Kutshanje I’solezwe belibike ibali malunga nesibhedlele iCanzibe eNgqeleni apho kukho ugqirha omnye qha.
Isithethi sesebe lezempilo ephondweni uSizwe Kupelo uthi uGqirha Dyantyi, uzakube ephelekwa yintloko yesebe uGqirha Thobile Mbengashe, kutyelelo okulindeleke ukuba luthabathe iintsuku ezintathu ukusukela ngoMvulo.
“Izibhedlele ezizakutyelelwa ziquka iKnessie Knight kuQumbu apho uluntu beluphakamise izikhalazo malunga nokulibaziseka komsebenzi wokuphucula esi sibhedlele oxabisa izigidi ezithathu zeerandi (R300 millon).
“Kwisibhedlele iSiphethu kuNtabankulu, apho kuthe gqolo ukubanjwa koqhankqalazo luluntu, uMphathiswa uzakutyelela khona, ayokuhlola umsebenzi wokuphuculwa kwesi sibhedlele oxabisa izigidi ezithathu zeerandi,” utshilo uKupelo.
Kwisibhedlele sase-St Elizabeth eLusikisiki, uDyantyi uzakuyosabela kwizikhalazo eziphakanyiswe luluntu ngethuba kutyelele uMongameli Jacob Zuma kulo mmandla kutshanje.
UDyantyi uzakutyelela nesibhedlele iGreenville eMbizana. IGreenville ikwimeko emaxongo ngenxa yobudala besibhedlele.
“Isibhedlele iCanzibe eNgqeleni sinogqirha omnye qha emva kokuba kokuyeka emsebenzini koogqirha abahlanu ngenxa yobubi bendlela eya kwesi sibhedlele. UMphathiswa uzakubhengeza ukuqeshwa koogqirha abathathu eCanzibe.
“Ukanti kwisibhedlele saseGcuwa, esinengxaki yokunqongophala koogqirha emva kokuyeka kwabathathu nyakenye, uMphathiswa uzakubhengeza ukuqeshwa kwabanye oogqirha,” kutsho uKupelo.
1285 views 0 likes Jul 12, 2017 Canzibe, Eastern Cape Share